Nagu saabsan - Ningbo Zhaolong Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Firfircoon adduunka oo dhan iyo soo saare hormuud ah, oo ku takhasusay aaladaha Smart home Electric oo leh khibrad 10 sano ka badan.
ZhaoLong waa mid firfircoon adduunka oo dhan iyo soo saare caan ah, oo ku takhasusay soo saarista iyo horumarinta nalalka habeenkii, nalalka LED, maqaallada guryaha, hadiyadaha iyo qalabka guryaha oo leh khibrad 20 sano ka badan. Waxaan nahay soo saaraha dahabka ee noocyo badan oo caan ah oo adduunka ah, Dhammaan alaabooyinka waxay helayaan UL & CUL, CE, Shahaadada FCC. Waxaan leenahay nidaam maamul tayo leh oo dhameystiran oo cilmiyaysan. Awoodeena, daacadnimadeena, tayadeena iyo adeegeena ayaa helnay aqoonsiga adduunka.
Shaqaalaheena ku hadla afka ingiriisiga ee leh khibrad balaaran waxay dhageysan doonaan codsiyadaada waxayna kaa caawin doonaan inaad doorato waxyaabaha saxda ah ee suuqaaga ku saleysan shuruudahaaga. Waxay sidoo kale kaa caawin doonaan dhamaan dhoofinta iyo dukumiintiyada dukumiintiyada. Aynu u wareejino alaabadaada suuqa si dhakhso leh adeeggayaga xirfadeed. Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabtayada ama aad rabto inaad kala hadasho amarka macaamiisha ee OEM / ODM, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir. Adigana waa lagusoo dhaweynayaa inaad soo booqato warshaddeena si aan ula xiriirno iskaashi dheeri ah. waxaan rajeyneynaa inaan la sameyno xiriiro ganacsi oo guuleysta macaamiisha adduunka oo idil.
ZhaoLong wuxuu ku yaalaa Yuyao, Gobolka Zhejiang, Shiinaha, wuxuuna gaarayaa 15,000 oo mitir murabac ah. Waxaan ka shaqeyneynaa xarun 18,000-mitir murabac ah oo lagu rakibay aqoon isweydaarsiyo loogu talagalay cirbadeynta balaastigga ah, wax soo saarka dusha sare ee PCB iyo qolka shirarka. Nidaamka IQC ilaa QA waa ISO 9 0 0 waan shahaado qaatay. Waxaan haynaa kooxda R&D waxaanan bixinnaa adeegyo OEM & ODM. Waxaan sameynay moodello macaamiil aad u tiro badan oo naqshad abuur leh iyo shaqo yaab leh. Waxay ka caawisay macmiilkayaga inuu ku guuleysto wax badan oo suuq ah.Waxyaabahayagu waxay ku qanciyeen kumanaan macaamiil ah adduunka oo dhan. Khibradayada, aqoonta tikniyoolajiyadeed iyo tas-hiilaadka wax soo saar ee horumarsan waxay noo suurta gelineysaa inaan ku siino alaab tayo leh sicirka ugu tartamada badan dhanka macaamiisha qalabka elektaroniga.Waxaan diirada saareynaa soo saarida alaabooyin cusub iyo hagaajinta habka wax soo saarka. si adag u xakameyso geeddi-socodka oo dhan, sii wadista hagaajinta tayada badeecadaha iskuna day sida ugu fiican ee aan ula kulanno shuruudaha macaamiisha.
Aynu u wareejino alaabtaada si ay si dhakhso leh suuq ugu adeegsadaan adeeggayaga xirfadeed. Nala soo xiriir maanta.
Kani waa bakhaarka warshaddeenna
Kani waa khadkayaga wax soo saar
Tani waa aqoon-isweydaarsigeenna R&D
Kani waa qolka muunada noo ah
Tani waa aqoon isweydaarsigeenna golaha
Kani waa aqoon isweydaarsigeena cirbadeynta